ခွန်ဆိုင်း - နောက်ကြောင်းပြန် သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ အိမ်စာ သင်ခန်းစာ နဲ့ ဝမ်းစာ ( ၄ ) - MoeMaKa Media
Home / Currents / Features / Khun Sai / ခွန်ဆိုင်း - နောက်ကြောင်းပြန် သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ အိမ်စာ သင်ခန်းစာ နဲ့ ဝမ်းစာ ( ၄ )
ခွန်ဆိုင်း - နောက်ကြောင်းပြန် သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ အိမ်စာ သင်ခန်းစာ နဲ့ ဝမ်းစာ ( ၄ )
(မိုးမခ) မတ် ၂၊ ၂၀၂၀
အိုင်စီဂျေအလွန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မြန်မာပြည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အိုင်စီဂျေမှာ တရားရင်ဆိုင်မယ်လို့ ကြေငြာလိုက်တဲ့ အချိန် ကမ္ဘာမှာ အတော် လှုပ်ခတ်သွားပါတယ်။ ဘယ်သူမှ မျှော်လင့် မထားကြဘူး ။ ပစ်ကွင်းထဲကို ထွက်ရပ်လိုက်တာမျိုး ။ အာရှတိုက်က ထင်ရှားထက်မြက် အမျိုးသမီး ခေါင်းဆောင်တယောက်က အစွပ်စွဲခံ နေရာ ကို ကိုယ့်ဖာသာ ဝင်ယူတဲ့သတင်း မို့ နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေ သတင်းအေဂျင်စီတွေ သတိထားမိစရာ ။ ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံ သတင်းဌါနပေါင်းစုံ က အာရုံကျ ။ ဂရုဓမ္မနဲ့ ကိုယ်မြင်သလိုတွေ ကောက်ချက်ချ ၊ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံပွက် ။ တချို့ အံ့သြ။ တချို့ မေးငေါ့။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားခံဖြစ်ပြီ။ လမ်းဆုံးသွား ပြီ။ဒါ နောက်ဆုံး ကျန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ခေါင်းတလား အတွက် နောက်ဆုံး သံမှို ။ သူတို့ တတ်သလို ရေးကြတယ်။ တချို့ကလဲ အခွင့်ရပြီ ။ စစ်တပ်နဲ့ ရော ကြိတ်ချေလို့ ရပြီ . အပြီးချေမှုန်းမယ့်သဘောနဲ့ မီးကုန်ယမ်းကုန် တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ .....ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နံမည်နဲ့ fall from grace ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေး ဂူဂဲလ်မှာထည့် ခေါက်ကြည့်လိုက်ရင် သတင်းဌါန ၂၀ မက ဆီက အဲဒီခေါင်းစဥ်နဲ့ အားရပါးရ ရေးထားကြတာ တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ အနှစ် အစိတ်လောက်တုန်းက အနောက်ကလူတွေမေးလာလို့ မြန်မာပြည်ကပါ လို့ ဖြေခဲ့ ရင်... အော် ...လေဒီ အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းပြည်ကလားလို့ ပြန်မေးတာ ကြားရတာဖြစ်ပြီး အခု ၂၀၁၇ နောက်ပိုင်းကျ တော့ ... အော် ရိုဟင်ဂျာ တွေနဲ့ ပြဿနာရှိနေတဲ့ တိုင်းပြည်လားလို့ ပြန်မေးတာ ခံရပါလိမ့်မယ်။ မီဒီယာ အင်အားကြီးတယ်။
ဒီတခါမှာ အစိုးရနဲ့ စစ်တပ် အတူတူ ရပ်ရတာ ဆိုတော့ စစ်တပ်နဲ့ အတူတူ ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို ထင်ထင်ရှားရှား ပြလိုက် တာပဲ ။ စစ်တပ်ကို ကာကွယ်ဘို့ သူ ကိုယ်တိုင်လာ တာ။ သူမဟာ ဂျီနိုဆိုဒ် အုပ်စုဝင် ။ ဂျီနိုဆိုဒ်ကို ထောက်ပန့် အားပေး ကူညီနေသူ ။ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ လူထု ထောက်ခံမဲရအောင် လုပ်တဲ့ လုပ်ရပ် ပါ ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေ အကြိုက် အမျိုးသားရေး ကဒ်ကို ကိုင်ပြီး ရပ်တာပါ ။နောက်ဆုံးကျရင် ဒီ တရားရုံးမှာ သူ ပဲ တရားခံ ဖြစ်မှာ ။ အဲလို ရေးတဲ့ ဆောင်းပါးရှင်တွေ လိုက်ဖတ် ကြည့်တော့ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေက ပရိုဂျက် ပါမောက္ခတွေ ။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ် လို အလုပ် ဖြစ်နေတဲ့ ထာဝရ ကင်ပိန်းဥက္ကဌ ။ သူတို့ အတွေးအခေါ်များ ဒီလောက်အကန့်အသတ်မှာ ရပ် ။
အိုင်စီဂျေ တရားရုံးသမိုင်းမှာတော့ ဘယ် အမှု မှ အဲဒီနေ့ လောက် လူများများလာပြီး တရားရင်ဆိုင်တဲ့လူကို ထောက်ခံဆန္ဒပြတာမျိုး မရှိခဲ့ ဖူးဘူးလို့ -နယ်သာလန်နယ်ခံတွေက အထူးတလည် ပြောကြပါတယ်။
ဒေါ်စုကို -လေးဖက်လေးတန် -တိုက်ခိုက်ကြတဲ့ အထဲမှာ ပထမတဖက်က ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားနေသူတချို့ ။ သူတို့ စွဲချက် တွေက ပြင်းထန်တယ်။ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇ ကိစ္စတွေအတွက် ဒေါ်စု က ခံရတဲ့ သူတို့ဖက်ကနေ ရပ်မ ပေး ဘူး။ စာနာစိတ်မရှိသူ ။ လူမျိုးရေးခွဲခြားသူ။ မူဆလင်မုန်းတီးသူ ။ နအဖစစ်တပ် ကို ကာကွယ်တာ အခု သေချာသွားပြီဆိုပြီး ကောက်ချက်အပြီးဆွဲကြပါတယ်။ ( ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရိုဟင်ဂျာကိုတိုင်းရင်းသား ဖြစ်လိုသူ များ ၊ ရခိုင်များ၊ မြန်မာများ၊ မြန်မာတပ်မတော် နဲ့ ၂ဖက်လုံးက အမျိုးသားရေး အစွန်းရောက်ဝါဒီများ ကြားမှာ ညပ်။ တဖက်ဖက်ကို လိုက်နေလို့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နေရာ ကို ရမလား မျှမျှတတ မတွေးကြပါလား ။ နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး ။ မတူညီတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကြား က ရှာရခက်နေတဲ့ ဘုံ အကျိုးစီးပွါး ကိစ္စ ။ ဒါတွေ အားလုံးကိုထည့်စဥ်းစားဘို့မလိုသူတွေရဲ့ လိုရာဆွဲပြောကြတဲ့ ပြဿနာတွေကြားမှာ ချောင်ပိတ်မိနေခဲ့ပြီ လို့ ကျွန်တော်ကတော့ ခံစားရ တယ် )
ပြောလိုက်လို့ ဘာတာဝန်မှ မရှိတဲ့လူ အတွက် တော့ တဖက်ဖက်က ရပ်ပြောလိုက်ရတာ သိတ်မခက်လှပါ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို စစ်ရာဇဝတ် မှု ရှိသူတွေနဲ့ ပူးပေါင်း တယ်လို့ စွပ်စွဲ အကဲဖြတ်မဲ့ အစား ။ ထိထိရောက်ရောက် ကူညီချင်တဲ့ စိတ်ရှိသူကို စိတ် ပျက်စေမယ့် အစား ။ နှိုင်းနှိုင်းဆဆ အဖြေရှာ ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေကို ကန်ထုတ်ပစ်မယ့် အစား ။ အိုင်စီဂျေမှာ ပူးတွဲတရားခံ လို့ ကောက်ချက် ဆွဲချလိုက်တာမျိုး ဟာ မှားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ သူ့ကို တရားခံ စာရင်းထဲ ထည့်ကြပြီ ဆိုပြီး သူ့ဖက်က စေတနာ ပျက်၊ ခေါင်းရှောင်သွားမယ့်ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပါဘူး။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက် ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ကို သူတတ်နိုင်သလို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ပေး သွားမှာ ပဲ လို့ ကျွန်တော်ယုံကြည် တယ် ။ ရိုဟင်ဂျာ ခေါ်မှ ရမယ်ဆိုသူများသာ မက ရခိုင် မျို ခမီ ချင်း ဒိုင်းနက် ဟိန္ဒူ မရာမာကြီး စတဲ့ စတဲ့ လူမျိုးစုတွေအားလုံး အတူယှဥ်တွဲ နေသွားကြမယ့် နည်းလမ်းကို ရှာဖွေနေသူတယောက် ဆိုတာ နားလည်ပေးနိုင်ကြရင် လမ်းမှန် ပြန်တွေ့ကြမှာပါ ။
အရေးယူအပြစ်ပေးတဲ့ နည်းနဲ့ အကုန် အရေးယူပစ်ရမယ် ဆိုတဲ့ ဖြေရှင်း နည်းကတော့ သံသရာရှည်မယ့်ကိစ္စ ၊ အဖုအထစ်ပိုများမယ့်လမ်းပါပဲ။ အစိုင်အခဲ ကြီးနေတဲ့ လူ့အဖွဲ့အစည်းအသိုင်းအဝိုင်းတွေကြား၊ သမိုင်းကြောင်းရှည်ဝေးလာခဲ့တဲ့ အမှန် အမှားတွေကြား ၊ ငါ့ဇာတ်လမ်း အမှန် -သူဇာတ်လမ်း အမှားဆိုတာတွေကြားမှာ၊ တဖက်က မှန်တယ် - တဖက်က မှားတယ် ရပ်ထားရင် ဖြေရှင်းရ ပိုခက်တယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်သူ နည်းလှ ပါရဲ့ ။ ရဲစခန်းတွေကို အစီအစဥ်တကျ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများ ရဲ့ ဇာတ်လမ်း အစတွေဟာ မိုက်မဲ အကျိုးနည်း လူထုထိခိုက် ၊ ကောင်းကျိုးအမြတ်ထက် ဆိုးကျိုးများတဲ့ အလုပ်တွေလို့ နားလည်ခဲ့သူ တွေလဲ ရိုဟင်ဂျာတွေဖက်မှာ ရှိမှာပါ ။ ပြင်းထန်တဲ့ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပြီးမှ လူ့အသိုင်းအဝိုင်း ၂ခု ကို ပိုဝေးကွာစေ ပြီးမှ၊ မိမိ အသိုင်းအဝိုင်း လူများစု ကို ဆင်းရဲ ဒုက္ခ ပိုရောက်စေပြီးမှ ၊ အဖြေရမယ်လို့ ယုံကြည် ကြ လား ။ ကျွန်တော်တော့ မထင် ။
ဒုတိယတဖက်ကတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရဲ့ အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေးလမ်းစဥ်ကို မကြိုက်သူ လက်မခံနိုင်သူ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို အရင် မဖျက် ပဲ စစ်တပ်နဲ့သွား ပေါင်းလို့ အခု အိုင်စီဂျေမှာ ပူးတွဲ တရားခံဖြစ်နေရပြီလို့ တိုက်ကွက်ဖေါ်ကြတဲ့ အစု။ စစ်တပ်နဲ့ ရင်ကြားစေ့တာ မှားတယ်။ ငါတို့ ရဲ့ မပူးပေါင်းရေးလမ်းစဥ်ကသာ အမှန်ဆိုပြီး -အခွင့်ရသခိုက် နှိတ်ကွပ်ခြင်းမှာ ဝမ်းသာနေပုံမျိုး။
တတိယ တဖက်ကတော့ အနောက်အုပ်စု ။ အနောက်ဥရောပ နိုင်ငံတွေ။ သူတို့ အစိုးရ သူတို့ရဲ့ မီဒီယာတွေ သူတို့ ဆီက လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သူတို့ ကလူ့အခွင့်အရေး အခြေခံ တခုတည်းမှာ ရပ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ နိုင်ငံရေးသမားအစစ်ဖြစ်သွားပြီ။ အာဏာရာထူးမြဲရေး နောက်ကို လိုက်နေရ ပြီ။ လူသားတွေရဲ့ အခြေခံအကျဆုံး လူ့အခွင့်အရေးကိုတောင် သူ မပေးနိုင်တော့ဘူး ။ သူ မကာကွယ်နိုင်တော့ ဘူး ။ လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲ မဲရအောင်လို့ အိုင်စီဂျေမှာ လာရပ်တာ။ လာခုခံတာ ။ လူ့အခွင့်အရေး အစ်ရှူးကို လစ်လျူရှုပြီး လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်တာကို ကာကွယ်ခုခံနေတယ်။ ဒါကြောင့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေနဲ့ အတူတူ အရေးယူရမယ်လို့ လှိုင်လှိုင် - ပြောကြရေး ကြပါတယ်။
စတုတ္ထ တဖက်ကတော့ ရခိုင် တပ်မတော် အေအေနဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ တချို့ ။ သူတို့ က မြန်မာ စစ်တပ် ရဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ စစ်ဆင်ရေးနယ်မြေတွေမှာ စစ်တပ်က ကျူးလွန်ထားတဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ အချိန်ကောင်းလို့ မြင်ကြပါတယ်။ အိုင်စီဂျေက စစ်တပ်ကို အရေးယူနိုင်အောင် အမှုပို ကြီးအောင် စစ်တပ် ကျူးလွန်ထားတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကို သက်သေတွေ ပို့ပေးပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆောင်ရွက်နေသူတွေ ကို ထောက်ခံမယ်လို့ ပြောကြ ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အိန္ဒိယ အစိုးရ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ ကုလားတန်မြစ် ကြောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအကြောင်း ။ တရုတ်ပြည်က ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဖက်စပ် လုပ်ကိုင်နေ တဲ့ ကျောက်ဖြူမဒေးကျွန်း ရေနက်ဆိပ်ကမ်း စီမံကိန်း။နောက် ပိုးခပတ်လမ်းစီမံကိန်း နဲ့ ဂတ်စ်ပိုက်လိုင်းတွေကြားမှာ စစ်ကို ဘယ်လောက်ကြာကြာ တိုက်ကြမယ်ဆိုတာ ခန့်မှန်းရင်း စိတ်မကောင်းပါ ။
အိုင်စီဂျေ ကိုတက်ရောက်ရင်ဆိုင်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ တာဝန်ယူမှု ၊တာဝန်ခံမှု ကို ကျွန်တော် တကယ် ချီးကျူးမိတယ် ။ သူရင်ဆိုင်ရ တာ တကမ္ဘာလုံးနဲ့ ပါ ။ သူ့ နှလုံးရည် ကို အတိအကျ မြင်လိုက်ရတဲ့နေရာ ။ သေချာပြင်ဆင်လာ တဲ့ တဖက် က အမှုပြိုင်ကို ပြင်ဆင်ချိန်နဲနဲ လေးအတွင်းမှာ အင်မတန် နှလုံးရည် ကောင်းကောင်း နဲ့ ရင်ဆိုင် တာ။ ကုလအစည်းအဝေး က လဲ အိုင်စီဂျေအမှုချိန်းနဲ့ ရက် ကပ်ပြီးမှ မြန်မာနိုင်ငံကို ရှုံ့ချတဲ့ အကြောင်း အဆို ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပြီး အိုင်စီဂျေကို မဲတင်းပေးခဲ့ပါ သေး တယ်။ ဂမ်ဘီယာရှေ့နေတွေ ဆီမှာ လဲ အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံဆီက နှစ်အတော်များများ ကတည်းက စုဆောင်းပြီးသား အသင့် အနေအထား သက်သေအထောက်အထားများအပြင် ။ ပူပူလောလောရထားတဲ့ အချက်အလက်များ ။ ( ဥပမာ ) ကိုယ် အာဏာ မပိုင်ခဲ့ တဲ့ ဝန်ကြီးဌါန ၃ခုက စစ်ဝန်ကြီး ၃ပါးနဲ့ ဒေါ်စု အတူတူရပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့ ဘီလ်ဘုတ်ကြီး ( တကယ်တန်းက မချိတ်ဖြစ်လိုက်ပါ) ကို တရားရုံးမှာတင်ပြတာမျိုး ။ဒီနည်းနဲ့ ဒေါ်စုကို တာဝန်ပုံချဘို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ တရားရင်ဆိုင်ချိန်မှာ ပဲ ကနေဒါ နဲ့ နယ်သာလန်နိုင်ငံတွေကလဲ ဂမ်ဘီယာဖက်က လိုအပ်တာ ကို အကူအညီကူပေးမယ်ပြောပြီး ရပ်ပြကြပါတယ်။
ဒေါ်စုဖက်မှာ ကျတော့ အားကိုးစရာ မြန်မာလူထုပဲ ကျန်တယ် ။ လူထုက အမှု အနေအထား အတိုင်းအတာကို သေချာ မသိကြဘူး။ သူတို့ ဟာ လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု ကို အားမပေး ဘူး မကျူးလွန်ဘူး ။ ဒီလို လူမျိုး နဲ့ တိုင်းပြည် အတွက် ဒေါ်စု ထွက်ရပ်ခဲ့ တာ လို့သိနေတာတခုထဲ ။ စစ်တပ်ကို ကာကွယ်ချင်ရုံတခုနဲ့ ဒေါ်စု သွားခဲ့ ရပ်ခဲ့ တာမဟုတ်ဘူးလို့ သိတယ်။ ဒီအသိနဲ့ ဒေါ်စုကို ထောက်ခံကြရတာ ။ ဒေါ်စုနဲ့ လူထုကြား ဆက်သွယ်ချက်ဟာ အပြန်အလှန်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားပဲ လို့ ကျွန်တော်ခံစားမိ တယ်။ ရှေ့ ဘာတွေ ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲ-ဒေါ်စုလဲ မသိဘူး။ ဘယ်သူမှ သေချာမသိဘူး ။ တာဝန်ခံဘို့ ခေါင်းဆောင်လိုနေချိန် ။ တာဝန်ယူဘို့ ခေါင်းဆောင်လိုနေချိန် ။ တရားရုံးကို လေးစား-တရားဥပဒေကို စံပြလိုက်နာကြောင်းမယ်ဆိုတဲ့ အသိနဲ့ သူ လာခဲ့တယ်။ လူထုယုံကြည်မှုကို သူ အားယူပြီး ခုခံ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ လေးစားတန်ဖိုးထားတဲ့ ခေါင်းဆောင် တရားခွင် ရောက်နေတဲ့မြင်ကွင်း ဟာ အင်မတန် ရင်နင့်ဖွယ်ပါ။ သူ မလုပ်တဲ့ အမှု -သူ ဘာလို့ လာ ရင်ဆိုင်သလဲ ။ လိုလား ။ ထိုက်တန်လား ။မလာလဲ ရတာပဲ ။ဘာလို့ရပ်သလဲ ။ သူ့ဂုဏ်သိက္ခာကို ချနင်းခံရမယ့် နေရာကို သူ ပြတ်ပြတ်သားသား လာခဲ့တယ် ။ သိက္ခာအားလုံးကို သူ ခဝါချထားပြီလို့ ကျွန်တော် အပြင်းအထန်တွေးရင်း ရင်နင့်မိပါတယ်။
ဒေါ်စု က တပ်မတော် စစ်မြေပြင်မှာ မှားယွင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ခုခံကာကွယ်ခဲ့တာ မတွေ့ပါဘူး။ အမှုဖြစ်စဥ် နဲ့ သက်သေတွေ ကို သေချာ နားထောင်။ ဖြစ်သင့်တဲ့ အတိုင်းအတာအတွက်သာ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တယောက်နေရာကနေ ခုခံသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ ရဲတယောက် စစ်သားတယောက် လမ်းပေါ်မှာ အကြမ်းဖက်လုပ်ကြံခံရပြီဆိုရင် အစိုးရ ဘယ်လို ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုတာ သိကြပါတယ်။ ရဲစခန်း ၃၀ တပြိုင်နက် စီးနင်းခံရပြီဆိုရင်လဲ ဘယ်အစိုးရမဆို ကိုယ့်တတ်စွမ်းသမျှ လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရေးကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းနားလည်ထားပါတယ် ။မြန်မာ့တပ်မတော် ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းတဲ့ ကာလတွေမှာ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မှားယွင်း ကျူးလွန်မှုတွေကို သူ ဖုံးကွယ်ဘို့ ကြိုးစားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တမျိုးစုလုံးကို သုတ်သင်ဘို့ ဆိုတဲ့ ဆွဲယူသွား ချက်က အတော် များနေလို့ ခုခံတာ ။ စစ်တပ်က စစ်ဆင်ရေး အပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေ ဆက်လက်ထွက်ခွါနေကြတာ လ များစွာ။ ယူအင်စာရင်းမှာ တဖြေးဖြေးချင်းတိုးနေခဲ့ ။ အစိုးရ တာဝန်ရှိသူများက ထွက်ခွါနေတဲ့ မိသားစုတွေကို ဘာကြောင့်ထွက်ခွါနေကြတာလဲ ဆိုတာသွားမေး ။ ပြန်ဖြေကြတဲ့ အရပ်သား တွေရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေလဲ တွေ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည် နံမည်တပ်ပြီး စွပ်စွဲခံရတာ ဆိုးပြီး တိုင်းသူပြည်သားတွေနစ်နာပါတယ်။ . ဂျီနိုဆိုဒ် နံမည်ဆိုး က တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးကို ထိခိုက်ပါတယ် ။ ချူချူချာချာနဲ့ တဖက်ပိတ်တွေ ။ မကျက်တကျက်တွေ ။ သူများ ဦးနှောက် နဲ့ အလုပ်လုပ်နေသူတွေကသာ စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်အပိုင်းကို ထိတာ ။ လူထု ကို မထိပါ ဘူးပြောနေရင်း ။ မကြာခင် ကပဲ အမေရိကား ပြည်ဝင်ခွင့်တွေ ပိတ်မယ် လုပ်တဲ့ အထဲ မြန်မာပြည် ကို ဆွဲထည့်သွားပါတယ်။ ဆက်ပြီး ဟိုက ဒီက ပိတ်ဆို့တာတွေမလာပါစေနဲ့ ၊ အလုပ်တွေ ရှား မကုန်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းရတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ အမှုက ရှည်ကြာမယ်လို့ နိုင်ငံတကာက ခန့်မှန်းကြ။ ဒါပေမယ့် တရားရုံးအဆုံးအဖြတ်ထဲမှာ နိုင်ငံရေး မေးခွန်းတွေ- ပုစ္ဆာတွေ ကို အဖြေထုတ်ပေးနိုင် တာ ပါမှာ မဟုတ် ပါဘူး။ ဒီအတွက် အဓိက မြန်မာအစိုးရ နဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ။နောက် အဓိက မျိုးနွယ်စုကြီး ၂ခု ရဲ့ ခေါင်းဆောင်များ ဆက် စကားပြောကြ အလုပ်လုပ်ကြ ရမယ် ။ ဒုက္ခသည်တွေ အမြန်ဆုံး အေးအေးချမ်းချမ်းပြန်လာနိုင်ကြရင် အကောင်းဆုံးပဲ ။ ကလေး ခုနှစ်သောင်းခွဲ အနာဂတ်ကို တွက်ဆ အလျော့ပေးကြရင်ပေါ့။
အိုင်စီဂျေမတိုင်ခင် နဲ့ အိုင်စီဂျေအပြီး ကိုယ်ဖက်က ရပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာ မိတ်ဆွေများစွာကို လဲ တွေ့ခဲ့ ရပါတယ်။ အိုင်စီဂျေကို ရင်ဆိုင်အပြီးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ပိုပြီး လိပ်ပြာသန့်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ လူထုမေတ္တာ ရောင်ပြန်ဟပ်နေပြီး သူဟာ အလုပ်တွေ ပိုပင်ပန်းနေပေမယ့် အပြုံးတွေ ပို ကြည်လင် လန်းဆန်းလာတယ် ( သူ့အသက်အရွယ်မှာ တကယ့် ခရီးရှည်တွေ မနားတမ်းဆက်တိုက်ထွက်နေတဲ့ကြားက ) လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ လူထုနဲ့ ပို နီးသွား၊ လူထုနဲ့ အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုပိုလာတယ်ထင်ပါတယ်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ တတိယသက်တမ်း မှာ ပါတီသစ်တွေ အများကြီးလဲ တက်လာကြပါတယ်။ ပါတီ သစ် မူဝါဒ တွေ ဘယ်လောက်ကြာအောင် တည်ဆောက်ရမယ်။လူထု ယုံကြည်မှု ရအောင်လုပ်ရမယ် မခန့်မှန်းနိုင်ပါ ။ အိုင်ယာလန်မှာ ရှင်ဖိန်းပါတီ က နေရာရအောင် နှစ် တရာလောက်လုပ်ရပြီး စကော့တလန်မှာ စကော့အမျိုးသားပါတီလဲ စကော့ပြည်နယ်ကို စိုးမိုးနိုင် ဘို့ နှစ် ၈၀လောက်လုပ်ရတာတွေ့ပါတယ်။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်နဲ့ ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တို့ ဟာ အမျိုးသားညီလာခံကျင်းပနေစဥ် ကာလနဲ့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကို မဝင်ပဲ သပိတ်မှောက်တဲ့ ကာလ အထိ အတိုင်အဖေါက်ညီညီ ရှိခဲ့ကြပါတယ် ။ အမျိုးသား ညီလာခံကို ဒီချုပ်က သပိတ်မှောက်ခဲ့ သလို ရှမ်းခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦး ဗိုလ်ချုပ်ဆေထင်တို့ အဖမ်းခံရတဲ့ အခါ ရှမ်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်လဲ ညီလာခံကို မတက်ပဲ ကန့်ကွက် သပိတ်မှောက်ဖူးတယ် ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို မဝင်ခဲ့ ကြတာ လဲ တူခဲ့ဖူး တယ်။ ၂၀၂၀ အတွက် ပြည်နယ်တွေမှာ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ ပိုပြင်းထန်ပေမယ့် တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာမှာတော့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပဲ အစိုးရ ဖွဲ့နိုင်မှာပါ ။ သူ့ ပါတီမူဝါဒမှာ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်မယ်ဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲ နီးလာလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို လူထု သိပြီး ယုံကြည် မဲပေးကြမှာမို့ပါ ။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဖို့ အသက် အရင်းအနှီးပေးခဲ့ သူ ဆရာဦးကိုနီက တော့ မမေ့ထိုက်သူပါ ။ အခု ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေးခြေလှမ်းတွေ စနေကြပါပြီ ။ ပုဒ်မ၂၆၁ ကိုလဲ ပြင်စေချင်ကြောင်းပြောခဲ့ ဖူး တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီ ချုပ်က ထောက်ပြတဲ့ ရှမ်းပြည် ဥပမာက လက်ရှိအနေအထားမှာ မပြင်သင့်သေးတဲ့အကြောင်း အတော် ဆီလျော်နေပြန်ပါတယ်။ တချိန်ပေါ့ ။
ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တခု အတွက် သူများနိုင်ငံ မှာ လက်နက်ကိုင်တွေ ဘယ်လို အပေးအယူ လုပ်ရသလဲ အကြောင်း ဆက် ပြောဖို့ စာက လဲ အတော်ရှည်နေပြန် ။
ခွန်ဆိုင်း ( ၂၉-၀၂ -၂၀၂၀)
ခွန်ဆိုင်း - နောက်ကြောင်းပြန် သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ အိမ်စာ သင်ခန်းစာ နဲ့ ဝမ်းစာ ( ၄ ) Reviewed by MoeMaKa on 9:00 AM Rating: 5